अनन्तले आइतबारबाट फिजियो थेरापी सुरु गर्ने | Hamro Khelkud
अनन्तले आइतबारबाट फिजियो थेरापी सुरु गर्ने
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – राष्ट्रिय फुटबल सेन्टरब्याक अनन्त तामाङले आइतबारबाट फिजियो थेरापी सुरु गर्ने भएका छन् । बिहीबार ग्रान्डी अस्पतालबाट घुँडाको शल्यक्रिया गरेका अनन्त शुक्रबार नै डिसचार्ज भइसकेका छन् । अब आइतबारबाट नियमित फिजियोमा जुट्ने बताइएको छ ।
नेपाललाई एएफसी सोलिडारिटी कप, १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) , बंगबन्धु गोल्डकप र त्यसअघि यू १९ साफ च्याम्पियन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अनन्त सोलिडारिटी कपको सेमिफाइनलका दौरान घाइते भएका थिए । गत महिना मलेसियाको कोचिङ एफसी सोलिडारिटी कपको सेमिफाइनलमा लाओसलाई टाइब्रेकरमा हराउँदाको खेलमा लडेका बेला विपक्षी खेलाडीले दायाँ घुँडा थिचिदिएका थिए । त्यसका वावजुद उनले फाइनल खेले । अनन्तको अर्थोपेडिक सर्जन चक्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले शल्यक्रिया गरेको थियो । अब उनले सात आठ हप्ता आराम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
‘कठिन समयमा शुभेच्छा दिनुहुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । चोट विस्तारै ठिक हुनेछ । अब केही महिनामा पहिला भन्दा पनि बलियो हुँदै फर्केने आशा छ,’ अनन्तले फेसबुक स्ट्याटसमा लेखकका छन्,‘ डा. पाण्डे र उहाँको टोली डा. अमित जोशी, डा. इश्वर प्रधानसहित ग्रान्डी अस्पताललाई विशेष धन्यावाद । ’
एएफसी सोलिडारिटी कपको सेमिफाइनलमा लाओसमाथि टाइब्रेकरमा जित हात पारेको खेलमा लडेका बेला उनको दायाँ घुँडा विपक्षी खेलाडीद्वारा थिचिएको थियो । त्यसका वावजुद उनले फाइनल खेलेका थिए ।
सोलिडारिटी कपको सेमिफाइनलमा लाओससँग उनले गोल गरेका थिए । त्यो उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल थियो । नेपाल २–२ को बराबरीपछि टाइब्रेकरमा लाओसलाई ३–० ले हराएर फाइनल पुगेको थियो । फाइनलमा मकाउलाई १–० ले हराउँदै नेपालले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपाधि जितेको थियो ।
अनन्तको उपचारको सबै खर्च अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले गरेको छ ।